Hena Ne Yehowa? ‘Hwɛ! Yɛn Nyankopɔn Ni’ | Bɛn
KENKAN WƆ Afrikaans Albanian Amharic Arabic Armenian Aymara Baoule Bengali Bicol Bulgarian Cambodian Catalan Cebuano Chichewa Chinese Mandarin (Simplified) Chinese Mandarin (Traditional) Croatian Czech Danish Dutch English Estonian Ewe Fijian Finnish French Ga Georgian German Greek Haitian Creole Hausa Hiligaynon Hindi Hungarian Iloko Indonesian Italian Japanese Kikongo Kikuyu Kiluba Kinyarwanda Kirghiz Kirundi Kisonge Kongo Korean Kwanyama Latvian Lingala Lithuanian Luganda Luo Macedonian Malagasy Malayalam Maltese Myanmar Ndebele (Zimbabwe) Ndonga Niuean Norwegian Oromo Pangasinan Papiamento (Aruba) Papiamento (Curaçao) Persian Polish Portuguese Punjabi Quechua (Bolivia) Rarotongan Romanian Russian Sango Sepedi Serbian Serbian (Roman) Sesotho (Lesotho) Seychelles Creole Shona Slovak Slovenian Solomon Islands Pidgin Spanish Sranantongo Swahili Swedish Tagalog Tahitian Tamil Thai Tigrinya Tiv Tok Pisin Tongan Tshiluba Tsonga Tswana Turkish Twi Ukrainian Umbundu Uruund Venda Vietnamese Xhosa Yoruba Zulu
‘Hwɛ! Yɛn Nyankopɔn Ni’
1, 2. (a) Nsɛm bɛn na wobɛpɛ sɛ wubisa Onyankopɔn? (b) Dɛn na Mose bisaa Onyankopɔn?
SO WUBETUMI ayɛ Onyankopɔn a wo ne no rebɔ nkɔmmɔ ho mfonini wɔ w’adwenem? Adwene a wubenya kɛkɛ sɛ amansan Hene no rekasa akyerɛ wo no—ma ehu tumi ka wo! Nea edi kan no, wotwentwɛn wo nan ase, na afei wutumi yi ano. Otie, ogye so, na ɔma wunya abotɔyam mpo de bisa no asɛm biara a wopɛ. Afei, asɛm bɛn na wubebisa no?
2 Tete no, ɔbarima bi baa tebea a ɛte saa mu. Ná ne din de Mose. Nanso, ebia asɛm a obisaa Onyankopɔn no bɛyɛ wo nwonwa. Wammisa n’ankasa, ne daakye, anaa adesamma tebea mpo ho asɛm. Mmom no, obisaa Onyankopɔn din. Ebia ɛno bɛyɛ wo nwonwa, efisɛ na Mose nim Onyankopɔn din ankasa dedaw. Ɛnde, ɛbɛyɛ sɛ na n’asɛmmisa no wɔ ntease a ɛkɔ akyiri. Nokwarem no, ɛno ne asɛm a ɛho hia sen biara a na Mose betumi abisa. Mmuae no fa yɛn nyinaa ho. Ebetumi aboa wo ma woayɛ ade a ɛho hia a ɛbɛma woabɛn Onyankopɔn. Ɔkwan bɛn so? Ma yensusuw saa nkɔmmɔbɔ a ɛyɛ anigye no ho.
3, 4. Nsɛm a esisii bɛn na ɛmaa Mose ne Onyankopɔn bɔɔ nkɔmmɔ, na dɛn ne asɛm pɔtee a na ɛwɔ nkɔmmɔbɔ no mu?
3 Ná Mose adi mfirihyia 80. Ná watu afi ne nkurɔfo, Israelfo a wɔyɛ nkoa wɔ Misraim no mu mfirihyia aduanan. Da koro, bere a na ɔrehwɛ n’asebarima nguan no, ohuu anwonwade bi. Ná nkyɛkyerɛ bi redɛw, nanso na ɛnhyew. Ɛkɔɔ so dɛwee, na ɛhyerɛn sɛ kanea a esi bepɔw so. Mose kɔɔ ho kɔhwɛe. Hwɛ sɛnea ɛbɛyɛ sɛ ɔbɔɔ piriw bere a ɔtee sɛ ɛnne bi fi ogya no mu rekasa kyerɛ no no! Onyankopɔn nam ɔbɔfo kasamafo bi so ne Mose bɔɔ nkɔmmɔ bere tenteenten. Na sɛnea ebia wunim no, Onyankopɔn maa Mose a na ɔretwetwe ne ho no adwuma sɛ onnyaw n’asetra a na asomdwoe wom no hɔ, na ɔnsan nkɔ Misraim nkogye Israelfo mfi nkoasom mu.—Exodus 3:1-12.
4 Afei, na Mose betumi abisa Onyankopɔn asɛm biara a ɔpɛ. Nanso, hyɛ asɛm a obisae no nsow: “Na sɛ midu Israelfo nkyɛn, na meka mekyerɛ wɔn sɛ: Mo agyanom Nyankopɔn na asoma me mo nkyɛn, na wɔka kyerɛ me sɛ: Ne din de dɛn a, dɛn na minse wɔn?”—Exodus 3:13.
5, 6. (a) Nokware a ɛho hia titiriw bɛn na Mose asɛmmisa no kyerɛ yɛn? (b) Adeyɛ a asɛm wɔ ho bɛn na wɔde aba Onyankopɔn din ankasa so? (d) Dɛn nti na Onyankopɔn din a wayi akyerɛ adesamma no ho hia yiye?
5 Nea edi kan koraa no, saa asɛmmisa no kyerɛ yɛn sɛ Onyankopɔn wɔ din. Ɛnsɛ sɛ yebu nokwasɛm titiriw yi adewa. Nanso, nnipa pii bu no adewa. Wɔayi Onyankopɔn din ankasa afi Bible nkyerɛase pii mu na wɔde abodin ahorow te sɛ “Awurade” ne “Onyankopɔn” na ahyɛ ananmu. Eyi yɛ nneɛma a ɛyɛ awerɛhow na asɛm wɔ ho sen biara a wɔayɛ wɔ nyamesom din mu no biako. Anyɛ yiye koraa no, sɛ wuhyia obi a dɛn ne ade a edi kan a woyɛ? Ɛnyɛ ne din na wubisa? Saa ara na ɛte wɔ Onyankopɔn a wubehu no no ho. Ɔnyɛ obi a onni din a ɔmpɛ nnipa na wontumi nhu no, anaasɛ wɔnte n’asɛm ase. Ɛwom sɛ yentumi nhu no de, nanso ɔwɔ nipasu, na ɔwɔ din—Yehowa.
6 Afei nso, sɛ Onyankopɔn yi ne din ankasa adi a, na ade kɛse bi a ɛyɛ nwonwa rebesi. Ɔto nsa frɛ yɛn sɛ yemmehu no. Ɔpɛ sɛ yɛde hokwan a yɛwɔ no di dwuma de paw nea eye sen biara wɔ asetra mu—sɛ́ yɛbɛbɛn no. Nanso, Yehowa ayɛ pii sen ne din a wabɔ akyerɛ yɛn. Wakyerɛ yɛn onii ko a ɔyɛ nso.
Nea Onyankopɔn Din Kyerɛ
7. (a) Onyankopɔn ankasa din kyerɛ dɛn? (b) Dɛn na na Mose pɛ sɛ ohu ankasa bere a obisaa Onyankopɔn Ne din no?
7 Yehowa ankasa na ɔpaw ne din, edin a ɛkyerɛ biribi titiriw. Edin “Yehowa” no kyerɛ “Nea Ɔma Ɛyɛ Hɔ.” Ɔda nsow wɔ amansan no mu, efisɛ ɔno na ɔbɔɔ nneɛma nyinaa, na ɔma n’atirimpɔw nyinaa ba mu. Ɛno ankasa yɛ ade a ɛsɛ sɛ ɛma yesuro no. Nanso, so nea Onyankopɔn din kyerɛ ara ne sɛ ɔno na ɔbɔɔ nneɛma? Ɛda adi sɛ na Mose pɛ sɛ ohu nneɛma pii. Nokwasɛm ne sɛ na Mose nim sɛ Yehowa ne Ɔbɔadeɛ no, na na onim Onyankopɔn din. Na Onyankopɔn din no nyɛ foforo. Na nkurɔfo de adi dwuma mfehaha pii. Akyinnye biara nni ho sɛ, bere a Mose bisaa Onyankopɔn din no, na ɔrebisa onii a edin no gyina hɔ ma no no ho asɛm. Nokwarem no, na ɔreka sɛ: ‘Wo ho asɛm bɛn na metumi aka akyerɛ wo man Israel a ɛbɛma wɔanya wo mu gyidi, na ama wɔagye adi sɛ wubegye wɔn ampa?’
8, 9. (a) Ɔkwan bɛn so na Yehowa buaa Mose asɛmmisa no, na mfomso bɛn na ɛwɔ sɛnea wɔtaa kyerɛ Ne mmuae no ase no ho? (b) Asɛm “mɛyɛ nea mɛyɛ” no kyerɛ dɛn?
8 Yehowa rebua no, ɔdaa ne nipasu fã bi a ɛyɛ anika adi. Ɛyɛ biribi a ɛfa nea ne din no kyerɛ ho. Ɔka kyerɛɛ Mose sɛ: “Mɛyɛ nea mɛyɛ.” (Exodus 3:14, NW) Bible nkyerɛase pii kenkan wɔ ha sɛ: “Me ne nea mene.” Nanso, sɛnea wɔde ahwɛyiye kaa asɛm no da no adi sɛ na ɛnyɛ sɛ Onyankopɔn resi wɔ a ɔwɔ hɔ so dua kɛkɛ. Mmom no, na Yehowa rekyerɛkyerɛ Mose—ne yɛn nyinaa—sɛ ‘ɔbɛyɛ’ anaasɛ ɔbɛyɛ ne ho sɛnea ehia sɛ ɔyɛ biara na ama wadi Ne bɔhyɛ ahorow so. J. B. Rotherham nkyerɛase no da nkyekyɛm yi adi pefee sɛ: “Mɛyɛ Me ho sɛnea mepɛ biara.” Hebri Bible ho ɔbenfo bi kyerɛkyerɛ kasasin no mu saa kwan yi so: “Sɛnea tebea anaa ahiade no te biara . . . , Onyankopɔn na ‘ɔbɛyɛ’ ahiade no ano aduru.”
9 Dɛn na na ɛno kyerɛ ma Israelfo no? Ɛmfa ho akwanside biara a wohyiae, ɛmfa ho tebea a emu yɛ den biara a ebia wɔkɔɔ mu no, na Yehowa bɛyɛ nea ɛsɛ sɛ ɔyɛ biara de agye wɔn afi nkoasom mu na ɔde wɔn aba Bɔhyɛ Asase no so. Akyinnye biara nni ho sɛ saa din no ma wonyaa Onyankopɔn mu ahotoso. Ebetumi ama yɛanya ahotoso saa ara nnɛ. (Dwom 9:10) Dɛn ntia?
10, 11. Ɔkwan bɛn so na Yehowa din ma yesusuw no ho sɛ obi a otumi dannan ne ho sen biara ne Agya a oye sen biara? Kyerɛkyerɛ mu.
10 Mfatoho bi ni: Awofo nim sɛnea wɔbɛdannan wɔn ho na wɔayɛ nsakrae a ɛho hia na ama wɔahwɛ wɔn mma. Ɔwofo betumi de da koro ayɛ ɔyarehwɛfo, oduannoafo, ɔkyerɛkyerɛfo, obi a ɔde nteɛso ma, ɔtemmufo, ne nneɛma foforo pii. Nnipa pii hu nnwuma ahorow a ɛsɛ sɛ wɔyɛ no a, na wonhu nea wɔnyɛ. Wohu ahotoso a edi mu a wɔn mma da no adi wɔ wɔn mu sɛ Paapa anaa Maame betumi ahwɛ ma wɔn akuru a ɛyɛ wɔn yaw adwo wɔn, wobetumi asiesie wɔn ntam nsɛmnsɛm nyinaa, asiesie agode biara a abubu, na wɔabua asɛmmisa biara a ɛba wɔn adwene a ɛrepɛ biribi ahu bere nyinaa mu no a wɔn adwenem nyɛ wɔn nãã. Awofo binom ankasa sintɔ ahorow brɛ wɔn ase, na ɛtɔ mmere bi a ɛma wɔhaw. Wɔte nka sɛ wontumi nni asɛyɛde ahorow yi pii ho dwuma yiye koraa.
11 Yehowa nso yɛ ɔwofo a ɔwɔ ɔdɔ. Nanso, bere a ommu n’ankasa gyinapɛn ahorow a ɛyɛ pɛ so no, biribiara nni hɔ a ontumi nyɛ mfa nhwɛ n’asase so mma wɔ ɔkwan a eye sen biara so. Enti ne din, Yehowa no, ma yesusuw ne ho sɛ Agya a oye sen biara a yebetumi anya. (Yakobo 1:17) Ankyɛ na Mose ne Israelfo anokwafo nyinaa hui sɛ Yehowa din fata no. Wɔde osuro hwɛe bere a Yehowa bɛyɛɛ Ɔsahene a onni nkogu, abɔde mu tumi nyinaa Wura, Mmarahyɛfo a obiara ne no nsɛ, Ɔtemmufo, Ɔdansifo, aduan ne nsu Mafo, ntama ne mpaboa so Korafo—ne nneɛma foforo pii no.
12. Ɔkwan bɛn so na su a Farao daa no adi wɔ Yehowa ho no yɛ soronko wɔ Mose de ho?
12 Enti Onyankopɔn ama wɔahu ne din ankasa, na waka ne ho nsɛm a ɛyɛ anika akyerɛ yɛn. Wada no adi mpo sɛ nea ɔka fa n’ankasa ho no yɛ nokware. Akyinnye biara nni ho sɛ Onyankopɔn pɛ sɛ yehu no. Dɛn na yɛreyɛ wɔ ho? Ná Mose pɛ sɛ ohu Onyankopɔn. Ɔpɛ a emu yɛ den saa a na Mose wɔ no kyerɛɛ n’asetra kwan, na ɛma ɔbɛnee ne soro Agya no yiye. (Numeri 12:6-8; Hebrifo 11:27) Awerɛhosɛm ne sɛ, Mose bere sofo no mu kakraa bi pɛ na na wɔwɔ ɔpɛ a ɛte saa. Bere a Mose bɔɔ Yehowa din kyerɛɛ Farao no, Misraim hene ɔhantanfo no kae sɛ: ‘Hena ne Yehowa.’ (Exodus 5:2) Farao ampɛ sɛ osua Yehowa ho ade pii. Mmom no, ɔkasa tiaa Israel Nyankopɔn no sɛ obi a ne ho nhia. Adwene a ɛte saa abu so nnɛ. Ɛmma nkurɔfo nhu nokwasɛm titiriw a ɛho hia sen biara no mu biako—sɛ Yehowa ne Amansan Hene.
Amansan Hene Yehowa
13, 14. (a) Dɛn nti na wɔama Yehowa abodin pii wɔ Bible mu, na ebi ne dɛn? (Hwɛ adaka a wɔato din “Yehowa Abodin Ahorow no Bi” no mu.) (b) Dɛn nti na Yehowa nkutoo na ɔfata sɛ yɛfrɛ no “Amansan Hene”?
13 Yehowa tumi sakra ne tebea araa ma enti, ɔwɔ abodin ahorow pii a ɛfata no wɔ Kyerɛwnsɛm mu. Abodin ahorow yi nsen ne din ankasa no; mmom no, ɛkyerɛkyerɛ yɛn nea ne din no gyina hɔ ma ho nneɛma pii. Sɛ nhwɛso no, wɔfrɛ no “Amansan Hene Yehowa.” (2 Samuel 7:22, NW) Saa abodin a ɛkorɔn a epue mpɛn ɔhaha pii wɔ Bible mu no kyerɛ yɛn Yehowa dibea. Ɔno nkutoo na ɔwɔ hokwan sɛ ɔyɛ amansan nyinaa Sodifo. Susuw nea enti a ɛte saa no ho hwɛ.
14 Yehowa da nsow sɛ Ɔbɔadeɛ. Adiyisɛm 4:11 ka sɛ: “[Yehowa, NW], wofata sɛ wugye anuonyam ne nidi ne tumi, efisɛ wo na wobɔɔ nneɛma nyinaa, na wopɛ nti na ɛyeyɛe na wɔbɔe.” Wɔrentumi nka nsɛm akɛse yi mfa obi foforo biara ho. Yehowa na ɔyɛɛ biribiara a ɛwɔ amansan yi mu! Akyinnye biara nni ho sɛ Yehowa fata nidi, tumi, ne anuonyam sɛ Amansan Hene ne nneɛma nyinaa Bɔfo.
15. Dɛn nti na wɔfrɛ Yehowa “mmeresanten hene”?
15 Abodin foforo a wɔde ma Yehowa nkutoo ne “mmeresanten hene.” (1 Timoteo 1:17; Adiyisɛm 15:3) Dɛn na eyi kyerɛ? Ɛyɛ den ma yɛn adwene a ɛtɔ sin no sɛ ɛbɛte ase, nanso Yehowa te hɔ daa wɔ akwan nyinaa so—tete ne daakye. Dwom 90:2 ka sɛ: “Wufi tete akyirikyiri kosi daakye akyirikyiri yɛ Onyankopɔn.” Enti Yehowa nni mfiase; ɔwɔ hɔ bere nyinaa. Wɔfrɛ no “nea ne nna akyɛ” ma ɛfata—na watra ase fi teteete a na obiara nni hɔ anaasɛ ansa na biribi foforo biara a ɛwɔ amansan yi mu reba! (Daniel 7:9, 13, 22) Hena na obetumi aka hokwan a ɔwɔ sɛ Amansan Hene no ho asɛm ma afata?
16, 17. (a) Dɛn nti na yentumi nhu Yehowa, na dɛn nti na ɛnsɛ sɛ ɛno yɛ yɛn nwonwa? (b) Ɔkwan bɛn so na ɛda adi sɛ Yehowa yɛ obi a ɔwɔ hɔ ankasa sen biribiara a yetumi hu anaa yɛde yɛn nsa ka?
16 Nanso, ebinom ka hokwan a ɔwɔ no ho asɛm, sɛnea Farao yɛe no. Asɛm no fã bi ne sɛ nnipa a wɔnyɛ pɛ de wɔn ho to nneɛma a wɔde wɔn ani hu so dodo. Yentumi nhu Amansan Hene no. Ɔyɛ honhom, nnipa ntumi mfa wɔn aniwa nhu no. (Yohane 4:24) Afei nso, sɛ nnipa a yɛyɛ honam ne mogya no de yɛn aniwa hu Yehowa Nyankopɔn a, nea ebefi mu aba no renyɛ papa. Yehowa ankasa ka kyerɛɛ Mose sɛ: “Wuntumi nhu m’anim, efisɛ onipa renhu m’anim nnya nkwa.”—Exodus 33:20; Yohane 1:18.
17 Ɛnsɛ sɛ ɛno yɛ yɛn nwonwa. Ɛda adi sɛ Mose nam ɔbɔfo nanmusifo bi so huu Yehowa anuonyam kakraa bi. Dɛn na efii mu bae? Ɛno akyi no, Mose anim ‘hyerɛn’ kosii bere bi. Israelfo no suroe mpo sɛ wɔbɛhwɛ Mose anim tẽẽ. (Exodus 33:21-23; 34:5-7, 29, 30) Ɛnde, akyinnye biara nni ho sɛ onipa biara ntumi nhwɛ Amansan Hene no a ɔwɔ n’anuonyam nyinaa mu no! So eyi kyerɛ sɛ ɔnyɛ obi a ɔwɔ hɔ ankasa a yebetumi ahu no na yɛde yɛn nsa aka no? Dabi, sɛ nhwɛso no, yegye nneɛma pii a yentumi nhu no tom ntɛm ara sɛ ɛwɔ hɔ—mframa, tumi a ɛma radio kyere nsɛm, ne nsusuwii ahorow. Afei nso, Yehowa te hɔ daa, mmere a etwam, mfirihyia ɔpepepem pii a enni ano mpo, nnya ne so tumi biara! Saa kwan no so no, ɔyɛ obi a ɔwɔ hɔ ankasa sen biribi a yetumi de yɛn nsa ka anaasɛ yɛde yɛn aniwa hu, efisɛ honam fam nneɛma nyin na etumi sɛe. (Mateo 6:19) Nanso, so ɛsɛ sɛ yesusuw no ho sɛ biribi a aniwa ntumi nhu, tumi bi a enni nipasu anaa biribi a N’ankasa Yɛɛ Ne Ho a wɔnte ase? Ma yɛnhwɛ.
Onyankopɔn a Ɔwɔ Nipasu
18. Anisoadehu bɛn na Hesekiel nyae, na “ateasefo” baanan no a wɔbɛn Yehowa no anim no yɛ dɛn ho nsɛnkyerɛnne?
18 Ɛwom sɛ yentumi nhu Onyankopɔn de, nanso nsɛm a ɛyɛ nwonwa bi wɔ Bible mu a ɛma yehu ɔsoro nsɛm kakra. Hesekiel ti a edi kan no yɛ nhwɛso biako. Wɔmaa Hesekiel nyaa Yehowa soro ahyehyɛde no ho anisoadehu, na ohuu ɔsoro teaseɛnam kɛse bi. Nea ɛyɛ nwonwa titiriw ne ahonhom abɔde a wɔwɔ tumi a wɔatwa Yehowa ho ahyia no. (Hesekiel 1:4-10) Saa “ateasefo” yi bɛn Yehowa, na ɛhɔ a wɔwɔ no ka Onyankopɔn a wɔsom no no ho biribi titiriw kyerɛ yɛn. Wɔn mu biara wɔ anim anan—nantwi anim, gyata anim, ɔkɔre anim, ne onipa anim. Ɛda adi sɛ eyinom yɛ Yehowa nipasu atitiriw anan no ho nsɛnkyerɛnne.—Adiyisɛm 4:6-8, 10.
19. Su bɛn na (a) nantwi anim (b) gyata anim (d) ɔkɔre anim ne (e) onipa anim no gyina hɔ ma?
19 Wɔ Bible mu no, wɔtaa de nantwi gyina hɔ ma tumi, na ɛfata saa, efisɛ ɔyɛ aboa a ɔwɔ ahoɔden kɛse. Wɔtaa de gyata nso gyina hɔ ma atɛntrenee, efisɛ nokware atɛntrenee hwehwɛ akokoduru, su a wonim sɛ agyata wɔ. Wonim akɔre yiye sɛ wɔwɔ ani a ehu ade yiye, na ɛma wotumi hu nneɛma nketenkete a ɛwɔ akyirikyiri kilomita pii. Enti ɔkɔre anim no bɛyɛ Onyankopɔn nyansa a ɛma ɔhwɛ ade kɔ akyiri no ho mfonini. Na onipa anim no nso ɛ? Wiɛ, onipa a wɔbɔɔ no Onyankopɔn suban so no yɛ soronko wɔ sɛnea otumi da Onyankopɔn su titiriw—ɔdɔ—adi no mu. (Genesis 1:26) Wɔtaa si Yehowa su ahorow yi—tumi, atɛntrenee, nyansa, ne ɔdɔ—so dua wɔ Kyerɛwnsɛm mu araa ma yebetumi aka ho asɛm sɛ Onyankopɔn su atitiriw.
20. So ɛsɛ sɛ yedwen ho sɛ ebia Yehowa su asakra, na dɛn nti na wubua saa?
20 So ɛsɛ sɛ yɛma ɛhaw yɛn sɛ ebia Onyankopɔn asakra wɔ mfirihyia mpempem pii a atwam fi bere a wɔkaa ne ho asɛm wɔ Bible mu no? Dabi, Onyankopɔn nipasu nsakra. Ɔka kyerɛ yɛn sɛ: “Me [Yehowa, NW], mensakra.” (Malaki 3:6) Sɛ́ anka Yehowa nkate bɛma wasakra ne su no, wada ne ho adi sɛ Agya pa wɔ ɔkwan a ɔfa so di tebea biara ho dwuma no ho. Ne su ahorow a ɛfata sen biara na ɔda no adi. Su ahorow anan no mu no, nea edi mu akoten ne ɔdɔ. Ɛda adi wɔ biribiara a Onyankopɔn yɛ mu. Ɔda ne tumi, atɛntrenee, ne ne nyansa adi wɔ ɔdɔ mu. Nokwarem no, Bible no ka biribi a ɛda nsow fa Onyankopɔn ne saa su yi ho. Ɛka sɛ: “Onyankopɔn ne dɔ.” (1 Yohane 4:8) Hyɛ no nsow sɛ ɛnka sɛ Onyankopɔn wɔ ɔdɔ anaasɛ Onyankopɔn yɛ ɔdɔ. Mmom no, ɛka sɛ Onyankopɔn ne dɔ. Ɔdɔ, ne su titiriw no, na ɛkanyan no wɔ biribiara a ɔyɛ mu.
21. Sɛ yehu Yehowa su ahorow no yiye a, yɛbɛte nka dɛn?
21 So woahu sɛ abofra ketewaa bi ateɛ ne nsa akyerɛ ne papa so de anigye ne obu a edi mũ aka akyerɛ ne nnamfo sɛ, “Me papa ni” pɛn? Onyankopɔn asomfo wɔ biribiara a wobegyina so ate nka saa wɔ Yehowa ho. Bible hyɛ bere bi a nnipa anokwafo bɛteɛm sɛ: ‘Hwɛ! Yɛn Nyankopɔn ni’ ho nkɔm. (Yesaia 25:8, 9) Dodow a wote Yehowa su ahorow ase no, dodow no ara na wobɛte nka sɛ wowɔ Agya a oye sen biara.
22, 23. Bible no ka yɛn soro Agya no ho asɛm dɛn, na yɛyɛ dɛn hu sɛ ɔpɛ sɛ yɛbɛn no?
22 Ɛmfa ho nea nyamesomfo ne nyansapɛfo a wɔyɛ katee akyerɛkyerɛ no—Agya yi nyɛ obi a onni tema, anaasɛ ɔmpɛ nnipa. Ɛyɛ den sɛ yɛbɛbɛn Onyankopɔn a onni tema, na Bible no nka yɛn soro Agya no ho asɛm sɛ ɔte saa. Mmom no, ɛfrɛ no ‘anigye Nyankopɔn.’ (1 Timoteo 1:11) Ɔwɔ su ahorow a ɛyɛ den ne nea edwo. Sɛ n’abɔde a wonim nyansa bu n’akwankyerɛ a wɔn yiyedi nti ɔde ama no so a, ‘ɛyɛ no yaw ne komam.’ (Genesis 6:6; Dwom 78:41) Nanso, sɛ yɛyɛ yɛn ade nyansam sɛnea N’asɛm kyerɛ a, yɛma ne ‘koma tɔ ne yam.’—Mmebusɛm 27:11.
23 Yɛn Agya no pɛ sɛ yɛbɛn no. N’asɛm hyɛ yɛn nkuran sɛ ‘yɛnhwehwɛ Yehowa sɛ ebia yɛbɛte ne nka na yɛahu no, nso ɔne yɛn mu biara ntam kwan nware.’ (Asomafo no Nnwuma 17:27) Nanso, ɛbɛyɛ dɛn na nnipa atumi abɛn Amansan Hene no?
Yehowa Abodin Ahorow no Bi
Ade Nyinaa so Tumfoɔ. Ne tumi nni ano, na ɛyɛ nea obiara ntumi nnyina ano.—Adiyisɛm 15:3.
Agya. Ɔne nkwa nyinaa, a daa nkwa ka ho, wura, ɔdɔ n’asomfo sɛ agya.—Mmebusɛm 27:11; Yohane 5:21.
Ɔkyerɛkyerɛfo Kunini. Ɔyɛ Ɔkyerɛkyerɛfo a onim nyansa sen biara a ɛsɛ sɛ yɛhwehwɛ ne hɔ akwankyerɛ.—Yesaia 30:20; 48:17.
Ɔbotan No. Ɔnsakra, ɔyɛ ɔbotantim a woguan toa no.—Deuteronomium 32:4.
Oguanhwɛfo. Ɔkyerɛ n’asomfo a wɔte sɛ nguan no kwan bɔ wɔn ho ban, yɛ wɔn honhom fam aduan ho nhyehyɛe.—Dwom 23:1.
TI 1 ‘Hwɛ! Yɛn Nyankopɔn Ni’
TI 2 So Wubetumi ‘Abɛn Onyankopɔn’ Ankasa?
TI 3 ‘Kronkron, Kronkron, Kronkron Ne Yehowa’
ƆFÃ 1 ‘Ɔwɔ Tumi Kɛse’
TI 4 ‘Yehowa Tumi So’
TI 5 Adebɔ Tumi​—“Ɔsoro ne Asase Yɛfo”
TI 6 Tumi a Ɛsɛe Ade​—‘Yehowa Yɛ Ɔdɔmmarima’
TI 7 Tumi a Ɛbɔ Nneɛma Ho Ban​—“Onyankopɔn Yɛ Yɛn Guankɔbea”
TI 8 Tumi a Wɔde Siesie Ade​—Yehowa ‘Reyɛ Ade Nyinaa Foforo’
TI 9 “Kristo, Onyankopɔn Tumi”
TI 10 ‘Suasua Onyankopɔn’ Wɔ Sɛnea Wode Tumi Di Dwuma no Mu
ƆFÃ 2 ‘Obi a Ɔdɔ Atɛntrenee’
TI 11 ““N’akwan Nyinaa Yɛ Trenee”
TI 12 ‘So Onyankopɔn Bu Ntɛnkyea?’
TI 13 ‘Yehowa Mmara Yɛ Pɛ’
TI 14 Yehowa Tuaa ‘Agyede Maa Nnipa Pii’
TI 15 Yesu ‘De Atɛntrenee Asi Asase So’
TI 16 ‘Atɛntrenee Mu’ a Yɛne Onyankopɔn Bɛnantew
ƆFÃ 3 ‘Ɔyɛ Koma Mu Nyansafo’
TI 17 ‘O Onyankopɔn, Nyansa Bun a Emu Dɔ!’
TI 18 Nyansa Wɔ ‘Onyankopɔn Asɛm’ Mu
Ti 19 ‘Onyankopɔn Nyansa Ahintasɛm Kronkron’
TI 20 ‘Ɔyɛ Koma Mu Nyansafo’—Nanso Odwo
TI 21 Yesu Da ‘Nyansa a Efi Nyankopɔn Hɔ’ Adi
TI 22 So “Nyansa a Efi Soro” Reyɛ Adwuma W’asetra Mu?
ƆFÃ 4 “Onyankopɔn Ne Dɔ”
TI 23 “Ɔno na Ɔdɔɔ Yɛn Kan”
TI 24 Biribiara Ntumi “Ntetew Yɛne Onyankopɔn Dɔ Mu”
TI 25 ‘Yɛn Nyankopɔn Ayamhyehye’
TI 26 Onyankopɔn a ‘Wayɛ Krado sɛ Ɔde Bɔne Befiri’
TI 27 ‘Ne Papayɛ Dɔɔso Dɛn Ara!’
TI 28 “Wo Nko na Woyɛ Ɔnokwafo”
TI 29 ‘Kristo Dɔ a Yebehu’
TI 30 ‘Monkɔ so Nnantew Ɔdɔ Mu’
TI 31 ‘Bɛn Onyankopɔn, na Ɔbɛbɛn Wo’
Text Baabi a wubetumi atwe nneɛma akenkan Bɛn Yehowa